Tendrombohitra goavam-be - PetrPikora.com
Tendrombohitra goavam-be (Riesengebirge alemà, Poloney Karkonosze) no totalin'ny geomorphological sy ny tendrombohitra avo indrindra amin'ny Czech sy ny Highlands. Any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Královéhradecký no misy azy andrefana ao atsimon'ny faritr'i Silesia. Ny tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny Tendrombohitra Giant dia Sněžka (1603 m). Araka ny tsaho, ny Tendrombohitra Krkonoše dia miambina ny toe-tsaina Krakonoš izay angano. Io dia iray amin'ireo faritra be tendrombohitra indrindra any amin'ny Repoblika Tseky.
Midadasika kokoa ny tendrombohitra Sinay rehetra anisan'izany ny Goavana efa teo ihany ny fahiny nofaritana ho toy ny Sudetenland, izay angamba ny anaran 'selta fiaviana (indrindra matetika adika hoe tendrombohitra lambo) na Balkan niaviany (adika hoe Goat Mountain). Ptolémée (about 85-165) ampiasaina amin'ny anarana Sudetenland ankehitriny Sudetayle (ny akora Tendrombohitra) sy Askiburgion (indrindra fa ny tendrombohitra, akaikin'ny tanàna Askiburgium fanimban-javatra, angamba mba Lusatian Mountains, anisan'izany ny an'ireo tendrombohitra). Dio Cassius ao amin'ny 3. dia nampiasa ny anarana hoe Tendrombohitra Vandalski ho an'ny Askiburgion. Taorian'ny Ptolemaic sarintany tonga tany amin'ny Repoblika Tseky sy Pavel Bohuslav Balbin vatolampy avy any ambony mampiasa ny anarana fanitarana Sudetenland ho an'ny tarika iray manontolo (17. Century).
Giant ny tenany amin'ny teny Rosiana Chronicles in 1095 antsoina hoe Czech Forest Přibík Pulkava in 1380 dia antsoina hoe ny oram-panala Mountains.
An'ireo tendrombohitra anarany tany am-boalohany niresaka momba ny avo roa ankehitriny Kolo sy ny etona na Kokrháč. Nanamarika ny an'ireo tendrombohitra (iombonana-SAMPA tsy ampy ", ny" an'ireo tendrombohitra) ny Ridge hita ao 1492 ao amin'ny firaketana an-tsoratra ny fizarana Štěpanice toetra amin'ny Wallenstein sy Jilemnický anjara tamin'ny 1499 avy eo amin'ny atao Vladislav II., Ny tranainy indrindra sisa velona sarintany izany anarana niasa Nicholas Klaudyán in 1518. Wenceslaus Hajek ao amin'ny tantara ny 1541 nampiasa ny anaran'i Czech sy Silesian an'ireo tendrombohitra.
Ny porofo voalohany amin'ny fanitarana ny anarany ny tendrombohitra Sinay rehetra dia avy 1517 rehefa ny anaram-boninahitra dia Krkonošské tendrombohitra, an'ireo tendrombohitra soratra famenon'i devoly endrika. Short goavana anarana io tahirin-kevitra voalohany tamin'ny taona 1601. Ny anarana no tena matetika heverina ho derivative ny taloha SAMPA fototra "hatoka" na "cracker", izay midika botry kely kesika na ny an-tendrombohitra, manina, Josef Jungmann dia mifandray amin'ny anaran'i SAMPA na selta foko Corconti na Korkontoi, noresahin'i Ptolémée, ny fiheverana fa voalaza tendrombohitra Asciburgius dia mitovy amin'izao fotoana izao ny an'ireo tendrombohitra (Korkontoi tsy ho velona na aiza na aiza ny loharanom-baovao akaiky ny Vistula, na ny marimarina kokoa Beskydy). Misy fikarohana mandika ny niandohan'ny 'ny anaran' X fototra, izay midika hoe "hantsana be vato, saha be vato", ary soso-kevitra ny rohy amin'ny anaran'ny Okrainiana Gorgany tendrombohitra ao amin'ny Eastern Carpathians.
Zavatra mitovy (Czech sy Silesian lafiny eny an-tendrombohitra dia mandra-1945 mponina ny ankamaroan'ny Alemà) ny hevitra an'ireo tendrombohitra (Riesengebirge, an'ireo tendrombohitra amin'ny teny Anglisy) dia avy amin'ny anarana Risenberg, izay Agricola (Georgius?) In 1546 voamariky amin'ny vanin-taona mafana. Ploralin'ny anarana Riesengebirge fa ny tendrombohitra Sinay rehetra dia voalohany ao amin'ny taona 1571.
Ny fototry ny rafitra ara-jeolojia dia ny fitambaran'ny kristaly ambaratonga voalohany sy ny vato matevina efa miorina (clamp). Any amin'ny faritra atsinanan'ny tendrombohitra, dia tsy dia fahita firy ny vatosoa. Ny kristaly kristiana fahiny dia mipaka amin'ny toerana sasany ary Pliton (granite) Krkonoše-Jizerský. Ny ranomandry ireo quatreurs dia mbola mitana ranomandry izay nanamboatra ny ambanilanitra. Nisy karazana lefona roa. Ny voalohany dia ny lohasaha amin'ny lohasaha ary ny karazana Scandinavian faharoa. Ny lemaka midadasika (havoan 'ny Devil, sns.) Dia miakatra ny ranomandry mankany amin'ny fiandohany. Ho an'ny hevitra tsara, afaka jerentsika ireo icebergs any Scandinavia izay maneho ny fomba itoany azy Giant Mountains afaka mijery. Ny ohatra tsara indrindra amin'ny asam-pirahalahiana dia ohatra ny Elbe Mine na Giant Mine, izay lohasahary novolena glacier (troges). Ny hafa mifangaro hafakely dia ny glacial karazany (and Giant Mountains fantatra amin'ny hoe karyas ho "lavaka"). Ny filazana mendrika dia ny lavaka fanangonam-bokatra sy ny lanezy any Polonina. Kary dia iray amin'ireo zavatra sarobidy indrindra azontsika atao Giant Mountains satria izy ireo no malaza indrindra amin'ny Tendrombohitra Giant. Hetsika Cryogenic v Giant Mountains Ilaina ny manonona, ohatra, ny renirano lehibe (havoana ambony) na efitra fisakafoana mangatsiaka.
Any amin'ny faritry ny Tendrombohitra Giant dia misy karazan-javamaniry sy biby. The Giant Mountains no faritra lehibe indrindra eo ambonin'ny fetra ambony kokoa any amin'ny Repoblika Tseky. Eo amin'ny haavon'ny 1200-1300 m mifarana eto ny fehikibon'ny ala. Ambony ny manodidina ny horohorontany, ny miaramila, ny vato ary ny ranomasina. Ity biotope tena mahalana ity dia antsoina hoe tundra arc-alpine. Any amin'ny toerana sasany dia mahita andian-tantely mihitsy aza isika. Ny tsimokaretina tany am-boalohany dia voadaroka tamin'ny fiantraikan'ny fatiantoka. Ao amin'ny toerana ambany, dia mitombo ny bokikely sy ny bokony. Ny Malacofauna ao amin'ny Tendrombohitra goavam-be dia misy karazana molluscs 90.
Ao amin'ny faritanin'ny an'ireo tendrombohitra no misy an'ireo tendrombohitra National Park (KRNAP) 36 faritra 400 ha, izay nanambara ny taona 1963, ary Karkonoski Park Narodowy (KPN), naorina tamin'ny 1959. Ny faritra fiarovana ny valam-pirenena dia manana ny haben'ny 18 400 ha amin'ny tseky. Tendrombohitra ihany koa hatramin'ny roa tonta 1992 Biosphere Reserve nanambara ny Firenena Mikambana Fanabeazana sy ny Siansa ary ny Kolontsaina (faritra ny Czech ampahany amin'ny 54 800 ha). Ny KRNAP dia zaraina amin'ny I., II. ary III. faritra fiarovana, izay toerana manan-danja indrindra ny faritra voalohany ary ny fitondrana fiarovana mafy dia mianjera amin'izany. Midika izany, ohatra, ny fepetra ahitàna ny I. sy II. Tsy voarohirohy ny hivoatra ivelan'ny maripanan'ny mpizahatany sy ny skiing. Ao amin'ny faritanin'ny an'ireo tendrombohitra ihany koa atao hoe Bird Vondrom-paritra sy manan-danja Bird Area, izay mandrakotra ny manontolo Biosphere Reserve, tsirairay avy. ny valan-javaboary anisan'izany ny faritra fiarovana.
Ny Tendrombohitra Giant dia avy amin'ny fomba fijery mazava indrindra amin'ny faritra avo indrindra ao amin'ny Repoblika Tseky. Ny fitsangatsanganana eo ambonin'ny sisintanin'i 1400 m dia azo ampitahaina amin'ny Green Coast. Mivoatra ny haavony indrindra ny elanelam-potoana. Ohatra, ny mari-pana anaty satroka ao Trutnov dia 6,8 degrees Celsius, raha ao Sněžka, izay toerana mangatsiaka indrindra ao Krkonoše, ny hafanana isan-taona dia 0,2 degrees Celsius. Amin'izany fotoana izany, io no toerana mangatsiaka indrindra any amin'ny Repoblika Tseky. Ny habetsaky ny oram-batravatra ao amin'ny Tendrombohitra Giant dia miankina amin'ny halaviran-toerana sy ny fihenan-dàlana. Ny zava-misy dia ny toeram-piantsonana any amin'ny Tendrombohitra Andrefan'ny Tendrombohitra Andrefana no mitrandraka kokoa noho ireo toeram-piantsonana any amin'ny Tendrombohitra Giant atsinanana mandritra ny taona satria ny rivodoza tandrefana no miorina any amin'ny Repoblika Tseky. Ny ankamaroan'ny rotsakorana dia mianjera amin'ny fahavaratra mandritra ny oram-batravatra ary ny orana farafahakeliny dia amin'ny volana Martsa, fa noho ny halalin'ny lanezy dia tsy dia hita loatra. Na dia ny tendrombohitra goavam-be aza no tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny Repoblika Tseky, dia toa tsy mahagaga izany satria ny Tendrombohitra Krkonoše dia miorina eo amin'ny ranon'ny Tendrombohitra Jizera. Amin'ny rihana, ny habetsahan'ny rotsakorana dia manodidina ny 1300 mm / taona, fa any amin'ny lohasaha dia mety hahatratra hatramin'ny 1500 mm / taona. Ny ampahany hafa amin'ny fisotroan-dronono dia voajanahary voajanahary, izay ampahany manan-danja amin'ny Tendrombohitra Giant. Amin'ny ankapobeny, ny daty nipoahan'ny rotsakorana voalohany tao amin'ny Tendrombohitr'i Krkonoše dia tsy azo lazaina satria afaka mitrandraka amin'ny tendrony saika isan-taona. Ny fonon-tselatra mijoalajoala dia eo amin'ny sisiny midina midina ny Novambra ka hatramin'ny May. Ny fanangona ny ranomandry indrindra dia miseho eo amin'ny tetezana manify (Map of the country izay misy ny lanezy tonga hatramin'ny metron 15!). Matetika ny rivotra mahery dia mipoaka (ny haavon'ny rivotra avo indrindra amin'ny sněžka 216 km / h).
Tendrombohitra goavambe avy any ambony
Trosky Castle Bohemian Paradise
© 2019 avy amin'i PetrPikora.com. All Rights Reserved.